VACC750 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၇၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 750
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC750
bottled water filtration line 750l- is used to filter industrial water. Good quality products, components and international standards is what you'll get when choosing to buy water purification products industry company VACC750- 750 liters of Vietnam An us.
ဒီစက်ကို စက်ရုံသုံးရေတွေကို စစ်ထုတ်ဖို့ အသုံးပြုပါတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်း၊ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေက Viet An ရဲ့ VACC750 ကို ဝယ်ယူတဲ့အခါ ရမယ့်အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Vietnam Security is the leading brand in Vietnam, we are committed to 100% quality of products. Continuing with the capacity of 150 L / h, 300 L / h, 400 L / h, capacity of 750 L / h is excellent capacity for the business units of bottled water, bottled in the country today.
ဗီယက်နမ်မှာ လုံခြုံမှုက အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ကလည်း ၁၀၀% အရည်အသွေးမြင့် ပစ္စည်းတွေဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါတယ်။ တစ်နာရီမှာ ၁၅၀ လီတာ၊ ၃၀၀ လီတာ၊ ၄၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေထက် တစ်နာရီမှာ ၇၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက် နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
With the ability to filter the water quickly to 750 liters per hour up the chain system filters industrial countries will help to process water production is fast, there will be many people who are using water resources to ensure hygiene standards more with more reasonable prices. Chain filter processing 750 liters of purified water VACC use water filtration columns suitable composite mechanical valve handle well water, tap water, brackish water into pure water .... With cheaper price than other products of the same type but water quality is not inferior.
တစ်နာရီမှာ ၇၅၀ လီတာ စစ်ထုတ်နိုင်သော အရည်အသွေးဖြင့် ချိန်းစနစ်စစ်ထုတ်ကိရိယာက ရေထုတ်လုပ်မှုကို မြန်စေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ကျန်းမာရေးထောက်ခံမှုရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လူတွေအများကြီးအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ VACC က ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာ အဆို့နဲ့ တွင်းရေ၊ ဘုံပိုင်ရေ၊ ပင်လယ်ရေတွေကို ရေသန့်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ ဈေးပေါတယ်ဆိုပေမယ့် ရေရဲ့ အရည်အသွေးကတော့ မနိမ့်ပါဘူး။
In addition, the Vietnamese model VACC750 An alsoalot of products for filtration, producing pure water for drinking water production base medium, small and large. You will findasystem on which devices. If you want to understand more about each product, please enter product details link to reference offline.
ဒီစက်အပြင် Viet An တွင် ရေစစ်ထုတ်ခြင်း၊ သောက်ရေအတွက် ရေသန့်စင်ပေးခြင်းစက်များ အကြီး အလတ် အသေး အရွယ်မျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီစက်တွအကြောင်း သိချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်ခ်တွင် လေ့လာလိုက်ပါ။
Chain structure Bottled water filter 750 liters of pure
ချိန်းဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ၇၅၀ လီတာရေစစ်ထုတ် ကိရိယာ
VACC750 the filtration equipment and water filter to ensure accordance with the standards of the Ministry of Health of Vietnam.
VACC750 ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ စံချိန်စံနှုန်းနဲ့အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
Line is designed with the structure and components of modern but very easy for the maintenance and replacement when met disrepair.
လိုင်းကို ခေတ်မီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ ပျက်စီးသွားရင် ပြုပြင်ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
Dimensions3x 0.5 x 1.7 m (L x W x H) not too big, not too bulky to transport.
Lines can be easily combined with pouring bottled or bottled to form one complete system for business and produce pure bottled water, bottled by the business establishment.
၃×၀.၅×၁.၇ မီတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်) ရှိပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ မကြီးမားပါဘူး။ လိုင်းကို စီးပွါးရေးအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ စနစ်ဖြစ်ပြီး ရေသန့်ဘူးတွေ ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ ပေါင်းပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
The maintenance, sanitation lines Bottled water purification composite mechanical valve 750 l / h easily not spend too much time as well as manpower.
Prices of water purification equipment is extremely attractive and is the choice for many customers.
ရေဆိုးထုတ်စနစ်တွေ ပါဝင်တာကြောင့် ထိန်းသိမ်းဖို့ လွယ်ကူသလို အချိန်အများကြီးလည်းမလိုဘဲ လူအင်အားလည်း မလိုပါဘူး။ ဈေးနှုန်းကလည်း သက်သာတာကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။
To avoid overload or short fire on each line of industrial water filters that Vietnam An offer designed gauges and electrical breakers if something goes wrong. Ensuring safety equipment as well as workshops, man.
စစ်ထုတ်ကိရိယာတွေရဲ့ လိုင်းတစ်ခုစီမှာ ပစ္စည်းတွေ ပိမနေစေဖို့ Viet An မှ တစုံတခုဖြစ်သွားတဲ့အခါ သိရဖို့ တိုင်းတာကိရိယာတွေ၊ လျှပ်စစ်အားဖြတ်တောက်ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ၊ အလုပ်ရုံနဲ့ လူတွေအတွက် လုံခြုံစေပါတယ်။
Manual water purification lines 750 lit- VACC750
လူလုပ်အားလိုသော ရေသန့်စင်ပေးသောလိုင်းများ ၇၅၀လီတာ-VACC750
After chain system water filter Bottled capacity of 750l / h were installed complete, you should open the tap continuously to water filled container and use within3hours to see the filtration efficiency as well as to rinse through the filter column prior to producing purified water continuously.
တစ်နာရီမှာ ၇၅၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ချိန်းစနစ် ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာကို တပ်ဆင်ပြီးနောက် ကွန်တိန်နာထဲဖြည့်ဖို့ ရေပိုက်ခေါင်းကို ဖွင့်ထားပါ။ စစ်ထုတ်ခြင်းအကျိုးနဲ့ စစ်ထုတ်ကိရိယာကို ဖြတ်ပြီး ဆေးကြောကာ ရေသန့်ကို ထုတ်ပေးတာကို မြင်ရဖို့ ၃ နာရီအတွင်း အသုံးပြုပါ။
Need to carefully read the user manual as well as the technicians noticed that our air-informed. If you have any questions please call 0943 41 41 41 to for assistance.
Note: Need to check whether it is suitable power source, and stable or not. Should put in placeadry, flat and keepasafe distance with other equipment in the factory, avoiding direct sunlight.
အသုံးပြုသူတွေအတွက် အညွှန်းစာအုပ်နဲ့ နည်းပညာရှင်တွေရဲ့ သတိပေးချက်ကို ဂရုတစိုက်ဖတ်ပေးပါ။ တကယ်လို့ မေးမြန်းချင်တာရှိရင် ၀၉ ၄၃ ၄၁ ၄၁ ၄၁ ကို ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ရန်- သင့်တော်သော ပါဝါအရင်းအမြစ် ဟုတ်မဟုတ်၊ တည်ငြိမ်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးဖို့ လိုပါတယ်။ ခြောက်သွေ့ပြီးစက်ရုံထဲရှိ အခြားပစ္စည်းများနှင့် ဝေးသော နေရာတွင် ထားပါ။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် မထိတွေ့ရ။
You should follow the maintenance schedule to replace the filter and maintenance of equipment on time. Ensuring water quality as well as the performance of the device.
When choosing to use mechanical valve filter chain line is you need to actively monitor the flow of water to conduct rinse filtration column. You only need to adjust the 3-door van on top of each column mounted filter, this operation is very simple, easy, and anyone can be conducted. Doing this will ensure the water quality of the system always ensures stability and safety standards for bottled water. 20l water bottles are manufactured from the production line Bottled water is always quality standards
ထိန်းသိမ်းမှုကို အချိန်မီလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ထိန်းသိမ်းမှု အချိန်ဇယားကို လိုက်နာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ရေအရည်အသွေးနဲ့ စက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုကို သေချာစေဖို့ပါ။ အဆို့ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာ ချိန်းလိုင်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ရေစီးဆင်းမှုကို သေချာ စောင့်ကြည့်ပေးရပါမယ်။ စစ်ထုတ်ကိရိယာပေါ်မှာ တံခါး ၃ ခုပါ ဗန်လေး တပ်ပေးရုံပါပဲ။ လည်ပတ်မှုက လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး လူတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ရေရဲ့ အရည်အသွေး တည်ငြိမ်မှု ရေဘူးရဲ့ လုံခြုံမှု စံချိန်စံနှုန်းတွေကို သေချာစေပါတယ်။ ဒီစက်နဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ရေဘူးတွေက အမြဲတမ်း စံချိန်မီပါတယ်။
Sales policy when purchasing water purification lines 750l-VACC750
VACC 750 ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ပေးသည့် မူဝါဒများ
Policy for customers to buy bottled water purification chain pure 750 liters / h columns in Vietnam An composite valve body
VACC 750 ကို ဝယ်ယူသည့်အခါ ပေးသည့် ဝယ်ယူသူတွေကို ပေးသော ပေါ်လစီများ။
• Free shipping for customers purchasing industrial water filtration systems and ancillary equipment to serve the production of pure bottled water in the entire area of Vietnam in all provinces.
• ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ ဒေသအားလုံးမှာရှိတဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကို အခမဲ့ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
• Warranty 12 months from date of installation and handover of products to customers.
• ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစပြီး ၁၂ လ အာမခံချက်ပေးပါတယ်။
• Receive technical support 24/7 and operating equipment.
• ၂၄/၇ နည်းပညာအကူအညီနဲ့ လည်ပတ်ဖို့ ပစ္စည်း ရယူလိုက်ပါ။
• Acceptable forms of payment by bank transfer or direct cash received. Customers purchaseawater purification chain composite 750 l / h the valve body.
• ဘဏ်ကနေလည်း ငွေလွှဲပေးလို့ရသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ငွေပေးချေလို့ရပါတယ်။
• Free consultation for customers of products come and support business production process pure bottled water, bottled.
• ဝယ်ယူသူတွေအတွက် အခမဲ့ ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။
Do you have any questions need to be answered about the problem wants to openafactory business bottled water, bottled, or questions related to the production line, do not hesitate to pick upacall for them me for advice and support as possible. Company shares trade Vietnam An aggregate happy to accompany you.
တကယ်လို့ ရေသန့်စက်ရုံဖွင့်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေစစ်ထုတ်လိုင်းတွေအကြောင်း စိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းခေါ်ပြီး အကြံဥာဏ် ရယူလိုက်ပါ။ Viet An မှ ကူညီပေးဖို့ အသင့်ပါပဲ။
The problems related?
Composite columns safe?
ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ကော်လံတွေက လုံခြုံရဲ့လား ?
Benefits of using mechanical valves for water purification?
ရေသန့်စင်ပေးတဲ့ စက်သုံး အဆို့တွေရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဘာတွေလဲ?
Producing bottled water business to how much capital?
ရေသန့်ဘူးစီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးစရိတ် ဘယ်လောက်လောက်ကုန်မလဲ?
Time has tested drinking water standards?
ရေသန့် စံချိန်စံညွှန်းတွေရော စမ်းသပ်ပြီးပြီလား?
Once you have decided to choose this VACC750 Purified water filtration system, you can study to investasynthetic filling system made of stainless steel to fill 35-60 jars/h (20L jar) and 150 bottles/hour (500ml bottle) withacompetitive price from just ... USD.
14 20 Filter Cartridge ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်2pc VA/ USApec
15 20 Filter housing ၂၀ စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ်2pc VA/ USApec
17 Membrane housing အလွှာပါးအိမ်2pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 750 750LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်